Inqubomgomo Yemfihlo bibyportal.com - amakhasi 2022
Inqubomgomo Yemfihlo bibyportal.com
Ngo bibyportal.com, kufinyeleleke kusuka bibyportal.com, enye yezinto eziza kuqala kithi ubumfihlo bezivakashi zethu. Lo mbhalo Wenqubomgomo Yobumfihlo uqukethe izinhlobo zolwazi oluqoqwa futhi lurekhodwe ngu bibyportal.com nokuthi siyisebenzisa kanjani.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga ulwazi olwengeziwe mayelana Nenqubomgomo yethu Yobumfihlo, ungangabazi ukusithinta.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi ivumeleke ezivakashini ezivakashela iwebhusayithi yethu mayelana nolwazi olwabelane ngalo kanye/noma oluqoqwe kulo. bibyportal.com.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavumelana neNqubomgomo yethu Yobumfihlo futhi uyavumelana nemibandela yayo.
Ulwazi lomuntu siqu ocelwe ukuthi usinike lona, ​​kanye nezizathu zokuthi kungani ucelwa ukuba usinikeze, kuzocaciswa kuwena ngesikhathi esikucela ukuthi usinikeze ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Uma usithinta ngokuqondile, singathola ulwazi olwengeziwe ngawe njengegama lakho, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, okuqukethwe ngumlayezo kanye/noma okunamathiselwe ongase usithumelele kona, kanye nanoma yiluphi olunye ulwazi ongakhetha ukusinikeza lona.
Lapho ubhalisela i-Akhawunti, singase sikucele imininingwane yakho yokuxhumana, okuhlanganisa izinto ezifana negama, igama lenkampani, ikheli, ikheli le-imeyili, kanye nenombolo yocingo.
Indlela esisebenzisa ngayo ulwazi lwakho
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo ngezindlela ezihlukahlukene, okuhlanganisa:
Nikeza, sebenzisa, futhi ulondoloze iwebhusayithi yethu
Thuthukisa, yenza kube ngokwakho, futhi wandise iwebhusayithi yethu
Qonda futhi uhlaziye indlela osebenzisa ngayo iwebhusayithi yethu
Thuthukisa imikhiqizo emisha, amasevisi, izici, nokusebenza
Xhumana nawe, ngokuqondile noma ngomunye wozakwethu, okuhlanganisa nenkonzo yamakhasimende, ukuze sikunikeze izibuyekezo nolunye ulwazi oluhlobene newebhusayithi, kanye nezinjongo zokumaketha nokuphromotha.
Thola futhi uvimbele ukukhwabanisa
bibyportal.com ilandela inqubo ejwayelekile yokusebenzisa amafayela okungena. Lawa mafayela angena ngemvume ezivakashini lapho evakashela amawebhusayithi. Zonke izinkampani zokubamba zenza lokhu kanye nengxenye yezibalo zezinsizakalo zokubamba. Ulwazi oluqoqwe ngamafayela okungena luhlanganisa amakheli ephrothokholi ye-inthanethi (IP), uhlobo lwesiphequluli, Umhlinzeki Wesevisi Ye-inthanethi (i-ISP), isitembu sedethi nesikhathi, amakhasi okubhekisela/okuphumayo, kanye nenombolo yokuchofoza. Lokhu akuxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi olungakhonjwa lomuntu siqu. Inhloso yolwazi ukuhlaziya amathrendi, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi kuwebhusayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu.
Amakhukhi kanye nama-Web Beacons
Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, bibyportal.com isebenzisa 'amakhukhi'. Lawa makhukhi asetshenziselwa ukugcina ulwazi oluhlanganisa okuthandwayo yizivakashi, namakhasi kuwebhusayithi isivakashi esifinyelele noma esiyivakashele. Ulwazi lusetshenziselwa ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi ngokwenza ngokwezifiso okuqukethwe kwekhasi lethu lewebhu ngokusekelwe ohlotsheni lwesiphequluli sezivakashi kanye/noma olunye ulwazi.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana namakhukhi, sicela ufunde isiqephu sendatshana samakhukhi kuwebhusayithi ethi Yenza Inqubomgomo Yobumfihlo.
I-Google DoubleClick DART Cookie
I-Google ingomunye womthengisi wezinkampani zangaphandle esizeni sethu. Iphinde isebenzisa amakhukhi, aziwa ngokuthi amakhukhi e-DART, ukunikeza izikhangiso kubavakashi besizindalwazi ngokusekelwe ekuvakasheleni kwabo ku-bibyportal.com nakwamanye amasayithi ku-inthanethi. Nokho, izivakashi zingakhetha ukwenqaba ukusetshenziswa kwamakhukhi e-DART ngokuvakashela Inqubomgomo Yobumfihlo yezikhangiso ze-Google kanye nenethiwekhi yokuqukethwe kula ma-URL alandelayo – https://policies.google.com/technologies/ads
Abanye babakhangisi esizeni sethu bangasebenzisa amakhukhi namabhikhoni ewebhu. Ozakwethu bokukhangisa babalwe ngezansi. Ngamunye wozakwethu bokukhangisa unenqubomgomo yakhe yobumfihlo yezinqubomgomo zedatha yomsebenzisi. Ukuze uthole ukufinyelela okulula, sixhumanise nezinqubomgomo zabo zobumfihlo ngezansi.
Izinqubomgomo Zobumfihlo Zozakwethu Bokukhangisa
Ungabheka lolu hlu ukuze uthole Inqubomgomo Yobumfihlo yozakwethu ngamunye wokukhangisa bibyportal.com.
Qaphela ukuthi bibyportal.com akakwazi ukufinyelela noma ukulawula kulawa makhukhi asetshenziswa abakhangisi bezinkampani zangaphandle.
Izinqubomgomo Zobumfihlo Zenkampani Yangaphandle
bibyportal.com Inqubomgomo Yobumfihlo ayisebenzi kwabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ngakho-ke, sikweluleka ukuthi ubheke Izinqubomgomo Zobumfihlo zalezi ziphakeli zezinkampani zangaphandle ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa. Kungase kuhlanganise ukwenza kwabo kanye nemiyalelo mayelana nendlela yokuphuma kwezinye izinketho.
Ungakhetha ukukhubaza amakhukhi ngokusebenzisa izinketho zakho zesiphequluli ngasinye. Ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe mayelana nokuphathwa kwamakhukhi ngeziphequluli zewebhu ezithile, lungatholakala kumawebhusayithi eziphequluli afanele.
Amalungelo Obumfihlo e-CCPA (Ungalithengisi Ulwazi Lwami Lomuntu Siqu)
Ngaphansi kwe-CCPA, phakathi kwamanye amalungelo, abathengi baseCalifornia banelungelo loku:
Cela ukuthi ibhizinisi eliqoqa idatha yomuntu siqu yomthengi lidalule izigaba nezingcezu ezithile zedatha yomuntu siqu ibhizinisi eliyiqoqile mayelana nabathengi.
Cela ukuthi ibhizinisi lisuse noma iyiphi idatha yomuntu siqu mayelana nomthengi eqoqwe ibhizinisi.
Cela ukuthi ibhizinisi elithengisa idatha yomuntu siqu yomthengi, lingathengisi idatha yomuntu siqu yomthengi.
Uma wenza isicelo, sinenyanga eyodwa yokukuphendula. Uma ungathanda ukusebenzisa noma yiliphi kulawa malungelo, sicela usithinte.
Amalungelo Okuvikelwa Kwedatha ye-GDPR
Sithanda ukwenza isiqiniseko sokuthi wazi ngokugcwele wonke amalungelo akho okuvikela idatha. Wonke umsebenzisi unelungelo lokulandelayo:
Ilungelo lokufinyelela - Unelungelo lokucela amakhophi edatha yakho yomuntu siqu. Singakukhokhisa imali encane ngale sevisi.
Ilungelo lokulungisa - Unelungelo lokucela ukuthi silungise noma yiluphi ulwazi okholelwa ukuthi alunembile. Futhi unelungelo lokucela ukuthi sigcwalise ulwazi okholelwa ukuthi aluphelele.
Ilungelo lokusula - Unelungelo lokucela ukuthi sisule idatha yakho yomuntu siqu, ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokukhawulela ukucutshungulwa - Unelungelo lokucela ukuthi sikukhawulele ukucutshungulwa kwedatha yakho yomuntu siqu, ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokwenqaba ukucutshungulwa - Unelungelo lokuphikisa ukucubungula kwethu idatha yakho yomuntu siqu, ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha - Unelungelo lokucela ukuthi sidlulisele idatha esiyiqoqile kwenye inhlangano, noma kuwe ngqo, ngaphansi kwezimo ezithile.
Enye ingxenye yezinto eziza kuqala kithi ukungeza ukuvikelwa kwezingane ngenkathi sisebenzisa i-inthanethi. Sikhuthaza abazali nababheki ukuthi babheke, babambe iqhaza, kanye/noma baqaphe futhi baqondise umsebenzi wabo ku-inthanethi.
bibyportal.com ayikuqoqi ngamabomu Ulwazi Lomuntu Siqu Oluhlonza izingane ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho inikeze lolu hlobo lolwazi kuwebhusayithi yethu, sikukhuthaza ngokuqinile ukuthi usithinte ngokushesha futhi sizokwenza imizamo yethu yonke ukuze sikususe ngokushesha lokho. ulwazi oluvela kumarekhodi ethu.